အာဋာနာဋိယသုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ စတုမဟာရာဇ်နတ်မင်းကြီးလေးပါးသည် အာဋာနာဋ ဟုခေါ်ဆိုသော နတ်မြို့တော်၌ စုရုံးစည်းဝေးကြကာ ဝိပဿီဘုရားမှစ၍ ဂေါတမဘုရားအထိ ခုနှစ်ဆူသော ဗုဒ္ဓများ၏ ဂုဏ်တော်ကို အာရုံပြု၍ ရှိခိုးပြီး အာဋာနာဋိယသုတ်ကို ဖွဲ့ဆိုခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်မှ ဘုရားရှင်၏ ဓမ္မစက်၊ ၎င်းတို့၏ အာဏာစက်ကို မခံယူကြသော နတ်ဆိုးများကို ဤသို့ ဤသို့သော နတ်ပြစ်ဒဏ်များခတ်မည် ဆိုကြသည်။ ထိုသို့ဆိုကြပြီးနောက်မှသာ လူ့ပြည်ရှိ ဂေါတမဗုဒ္ဓရှိရာသို့ များပြားသော နတ်စစ်သည်ဗိုလ်ပါများနှင့်အတူ သွားခဲ့ကြသည်။
အသျှင်ဘုရား မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်တို့သည် အသံနည်းကုန်သော ပြည်ရွာတွန်သံ မရှိကုန်သော လူတို့၏ အငွေ့အသက် ကင်းကုန်သော လူတို့၏ လျှို့ဝှက်သော အမှုကို ပြုခြင်းငှါ ထိုက်ကုန်သော ကိန်း အောင်း၍ နေခြင်းငှါ လျောက်ပတ်ကုန်သော ဝေးကွာသော တောကျောင်းတို့ကို မှီဝဲနေထိုင်ပါကုန်၏။ ထို ကျောင်းတို့၌ နေသော တန်ခိုးကြီးသော ဘီလူးတို့သည် ရှိပါကုန်၏။ အကြင်ဘီလူးတို့သည် မြတ်စွာ ဘုရား၏ သာသနာတော်၌ မကြည်ညိုကုန်၊ ထိုဘီလူးတို့ကို ကြည်ညိုစေရန် မြတ်စွာဘုရားသည် အာဋာနာဋိယမည်သော ပရိတ်အရံအတားကို ရဟန်းယောက်ျား ရဟန်းမိန်းမ ဥပါသကာယောက်ျား ဥပါသိကာ မိန်းမတို့၏ အကာအကွယ် အစောင့်အရှောက် ဖြစ်ခြင်းငှါ သင်ပေးတော်မူပါလော့ဟု (လျှောက်၏)။
၁။ အပ်ပသန်နေဟိ နာထတ်သ
အ-မနုတ်သေဟိ စန် ဒေ ဟိ
၂။ ပရိသာနံ စတတ်သန်နံ
အ-ဟိမ်သာယ စ ဂုတ်တိယာ
ယံ ဒေသေသိ မဟာဝီရော၊
၃။ဝိပတ်သိတ်သ စ နမတ်ထု
သိခိတ်သပိ စ နမတ်ထု
၄။ဝစ်သ ဘုတ်သ စ နမတ်ထု၊
ကတ်သပတ်သ စ နမတ်ထု
ဝိပ်ပ မုတ်တတ်သ သတ်ဗ-ဓိ
၆။ အင်ဂီရ-သတ်သ, နမတ်ထု
သက်ကျ ပုတ်တတ်သ သိရီမတော
ယော အိမံ ဓမ်မံ-ဒေသေသိ
၇။ယေ စာပိ-နိတ်ဗုတာ လောကေ
တေ ဇနာ အ-ပိသုဏာထ
ယံ နမတ်သန်တိ ဂေါတမံ
၉။အေတေ စင်​ညေစ သမ်ဗုတ်ဓါ
သတ်ဗေ ဗုတ်ဓာ သမ-သမာ၊
သတ်ဗေ ဗုတ်ဓာ မဟိတ်ဓိကာ
၁၀။ သတ်ဗေ ဒသ-ဗလူပေတာ၊
သတ်ဗေ တေ ပတိဇာနန်တိ
အာသဘံ ထာန မုတ်တမံ
၁၁။ သီဟ-နာဒံ နဒန်တေ တေ
၁၂။ အုပေတာ ဗုတ်ဓ-ဓမ်မေဟိ၊
၁၃။ ဗျာမတ်ပ-ဘာယ သုပ်ပ-ဘော
သတ်ဗေ တေ မုနိ-ကုန်ဇရာ
ဗုတ်ဓာ သတ်ဗင်ညုနော အေတေ
သတ်ဗေ ခီဏာသဝါ ဇိနာ
၁၄။မဟာ ပ-ဘော မဟာတေဇာ
၁၅။ ဒီပါ နာထာ ပတိဋ္ဌာ စ၊ တာဏာ လေဏာ စ ပဏိနံ။ ဂတီ ဗန္ဓူ မဟေဿာသာ၊ သရဏာ စ ဟိတေသိနော
၁၅။ဒီပါ နာထော ပတိတ်ထာ စ၊
တာဏာ လေဏာ စ ပါဏိနံ
ဂတီ ဗန်ဓူ မဟစ်သာသာ၊
သရဏာ စ ဟိတေသိနော
၁၆။ သဒေဝကတ်သ လောကတ်သ
သတ်ဗေ အေတေ ပရာယဏာ
တေသာဟံ သိရ-သာ ပါဒေ
၁၇။၀စ-သာ မန-သာ စေ၀
ဝန်ဒါမေ တေ တ-ထာဂတေ
သာယနေ အာသနေ ထာနေ
ဂမနေ စာပိ သတ်ဗဒါ
၁၈။သဒါ သုခေန ရတ်ခန်တု၊
ဗုတ်ဓာ သန်တိကရာ တုဝံ
တေဟိ တွမ် ရက်ခိတော သန်တော
မုတ်တော သတ်ဗ-သယေဟိ စ
နိတ်ဗုတော စ တုဝံ ဘဝ
၂၀။ တေသံ သစ္စေန သီလေန၊ ခန္တိမေတ္တာ ဗလေန စ။ တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊ အရောဂေန သုခေန စ။
၂၀။တေသံ သစ်စေန သီလေန၊
တေပိ အမ်မှေ နုရက်ခန်တု
အ-ရောဂေန သုခေန စ
၂၁။ ပုရတ်ထိမတ်-သမိန် ဒိသာဘာဂေ
သန်တိ ဘူတာ မဟိတ်မိကာ
သန်တိ ဒေဝါ မဟိတ်ဓိကာ
အ-ရောဂနေ သုခေန စ
၂၃။ ပစ်ဆိမတ်-သမိမ် ဒိသာဘာဂေ
သန်တိ နာဂါ မဟိတ်ဓိကာ
၂၄။ အုတ်တရတ်-သမိန် ဒိသာဘာဂေ
သန်တိ ယက်ခါ မဟိတ်ဓိကာ
၂၅။ ပုရတ်ထိမေန ဓတရတ်ထော
ကုဝေရော အုတ်တရံ ဒိသံ
၂၆။ စတ်တာရော တေ မဟာရာဇာ
၂၇။အာကာသတ်ထာ စ ဘူမတ်ထာ
ဒေဝါ နာဂါ မဟိတ်ဓိကာ
၂၈။အိတ်ဓိမန်တော စ ယေ ဒေဝါ၊
၀သန်တာ အိဓ သာသနေ
၂၉။ သတ်ဗီတိယော ဝိဝစ်ဇန်တု၊
သောကော ရောဂေါ ဝိနတ်သတု
မာ တေ ဘဝန်တွန်တရာယာ
သုခိ ဒီဃာယုကော ဘဝ
နိတ်စံ ဝုတ်ဒါ ပစာယိနော
စတ်တာရော ဓမ်မာ ဝတ်ဒန်တိ၊
အာယု ဝဏ်​ဏောသုခံ ဗလံ
၂. ထိုဘီလူး လူကြမ်းတို့က ပရိသတ်ကို မညှင်းဆဲ မနှိပ်စက်နိုင်စေရန်နှင့် သူတို့ကပင် ကူညီစောင့်ရှောက်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကြီးမြတ်သောလုံ့လရှိတော်မူသော် မြတ်စွာဘုရားက ဤအာဋာနိဋိယ ပရိတ်တော်အရံအတားကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ယခုအခါ၌ ဤပရိတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စုပေါင်း၍ ရွတ်ဆိုကြပါကုန်စို့။
၁ဝ. ခပ်သိမ်းကုန်သော ဘုရားရှင်တို့သည် အားတော်ဆယ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူ၏။ ရဲရင့်သော ဝေသာရဇ္ဇဉာဏ်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူကြ၏။ မြတ်သောယောက်ျား ဥသဘဖြစ်တော်မူ၍ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို ရရှိကြောင်း ဝန်ခံကြကုန်၏။
၁၁. ဘုရားရှင်တို့သည် မည်သည့် ပရိသတ်ဗိုလ်ပုံအလယ်၌ လွန်စွာရဲရင့်တော်မူကြ၏။ ကေသရာဇာခြင်္သေ့မင်းကဲ့သို့ ရဲရဲရင့်ရင့်စကားဆိုကြ၏။ မည်သူ တဦးတယောက်မျှ မလည်မပတ်စေနိုင်သော ဓမ္မစကြာတရားတော် ကိုလည်း လည်ပတ်စေကုန်၏။ (ဟောကြားကုန်၏။)
၁၂. ဘုရားရှင်တို့သည် လူသုံးပါးတို့၏ ခရီးလမ်းညွှန် ဖြစ်ကြ၏။ ဘုရား၏ကျေးဇူးတရား (၁၈) ပါးနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်၏။ (၃၂) ပါးသော ယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်ကြီးတို့နှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်မူကြ၏။ လက္ခဏာတော်ငယ် (၈ဝ) တို့နှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်မူကြ၏။
၁၆. ထိုဘုရားရှင်တိုင်းသည် နတ်တို့၏ လဲလျောင်းရာ၊ လူတို့၏ မှီခိုရာ ဖြစ်ကြကုန်၏။ အကျွန်ုပ်သည် ယောက်ျားဟူသမျှတို့ထက် သာလွန်မြင့်မြတ်တော်မူသော ထိုဘုရားရှင်တို့၏ ခြေတော်တို့ကို ဦးနှိမ် ရိုကျိုး ရှိခိုးပါ၏။
၃ဝ. ရတနာမြတ်သုံးပါးအား ရိုသေစွာ ရှိခိုးဆည်းကပ်လေ့ရှိသောသူ၊ သီလရှိသူ၊ သမာဓိရှိသူ၊ ပညာရှိသူတို့ကို အမြဲမပြတ်ရိုသေလေးစားတတ်သူသည် အသက်ရှည်၏။ အဆင်းလှ၏၊ ချမ်းသာကြီးပွား၏။ ခွန်အားဗလ တိုးတက်လေ၏။ အသက်ရှည်ခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း၊ ချမ်းသာကြီးခြင်း၊ ခွန်အားကြီးခြင်းဟူသော ဤကျေးဇူးတရားတို့သည် ထိုပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ ထာဝစဉ် တိုးတက်လျက်သာနေကြကုန်သတည်း။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာဋာနာဋိယသုတ်&oldid=747283" မှ ရယူရန်
၁၄ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၁၂:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၁၂:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။